Webgl lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Manolotra ny lalao maimaim-poana amin'ny aterineto webgl izahay, mba hisafidianana toro-lalana iray avy amin'ny tolotra maromaro. Ny fahafinaretana dia tontolo mahavariana feno haingam-pandeha, angovo, fisaratsarahana ary loza. Mifidy izay hanokana fotoana malalaka ianao: fandringanana monstrano, fitafiana lamaody, fitadiavana zavakanto taloha, fitsangatsanganana ao anaty labozia na asa fanatanjahan-tena. Misy teboka marobe, ary ny grafika 3D dia mampiray azy ireo, mampiseho ny antsipirian'ny sehatra virtoaly avy amin'ny andaniny rehetra. Ny lohahevitra tsirairay dia manana ny fahaiza-manaony manokana, saingy te-hahomby foana ianao.
Battle Simulator: Mpanohitra Stickman
Lalao Webgl tamin'ny Category:
Farany Webgl lalao
Ady an-keriny fanoherana
Lalao Online Rehetra Webgl lalao an-tserasera
games webgl: ny hatsaran'ny tontolo manerantany
Rehefa avy niseho tao amin'ny tranonkala iray izay manolotra karazana tranonkala webgler, dia te hampifantoka ny sainareo amin'ny sehatra iraisan'izy ireo aho, ny habaka telo dimanjan'ny habaka. Ity tarehimarika ity dia mamaritra ny vokatra atolotra, mamela azy ireo hampifandray azy ireo amin'ny teny hoe "webgl". Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Azo antoka fa tsy liana amin'ny tranokala rindrambaiko, ny fandefasana programa, ary ireo teboka sarotra izay mitondra mankany amin'ny vokatra farany ny mpilalao. Azo antoka fa izany dia ahafahanao mamorona sary amin'ny interactive 3D, fa ny tantara sy ny tranonkalan'ny tranonkala firaketana an-tsarimihetsika izay horaisinao.
Ohatra amin'ny torolàlana omena napetraka
Azo lazaina fa mahafinaritra be amin'ny fanaraha-maso tsotra sy ny tantara tsotra. Tsy afaka miantso azy ireo ho toy ny loko na ny zava-misy ianao, fa ny teknolojia azo ampiharina amin'izy ireo dia ahafahanao mijery ny habaka virtoaly amin'ny lafiny hafa. Tena ilaina amin'ny tifitra na mpandeha an-tongotra izany, fa ankoatra azy ireo dia misy karazana hafa mahaliana.
Mazava ho azy fa ny lohahevitra mahazatra indrindra dia mihazakazaka amin'ny karazana fiara, fanatanjahan-tena ary tifitra. Ny ankamaroan'ireo ankizilahy dia maniry ny hilalao lalao amin'ny Internet toy izany.
Miverena bebe kokoa momba ny malaza indrindra
Ny vokatra maro dia mampahatsiahy mafy ny tsirairay amin'ireo mpilalao sarimihetsika Doom sy Counter Strike. Miaraka amin'ny pistol, milina fiara na izay anananao, tsy maintsy mijoro amin'ny zombies mahatsiravina, monsters, ary manara-maso ny fahavalo miovaova kokoa.
Inona no zava-nitranga, hitanao tamin'ny olona mpitarika. Famotopotorana ny vakim-paritra, fanangonana zavatra manan-danja (kitapo fanampiana voalohany, cartridges, grenady, trondro, sns.). Andramo ny tsy hitan'ny fahavalo iray izay nanara-maso ireo mpihaza toa anao nandritra ny fotoana lava. Indraindray ianao dia tsy maintsy mamakivaky ny faritra misokatra, ary miaro ny ra mandriaka. Indraindray ny hany fomba hivelomana dia ny miafina ao ambadik'izany, ary avy eo dia mitifitra ireo fahavalo. An-jatony koa ny lalao ara-panatanjahantena ao anaty aterineto.
Misy safidy tsara amin'ny faritra:
Varavarankely varotra: fiara, kamio, traktera, fiaramanidina, sambo moto
Rehefa mifehy ny totozy na ny totozy, dia tokony hiezaka ny hahazo ny vokatra tsara indrindra. Ny fifaninanana dia maharitra mandritra ny minitra maromaro, misy ny halavany sy ny ambaratonga, ary, amin'ny fomban-drazana lavabe, dia mihamitombo tsikelikely. Nefa ankoatra ny lalao, izay misy karazana fanatanjahantena aseho, misy safidy amin'ny Lalao Olaimpika, izay tokony hampiseho anao amin'ny fomba samihafa. Ny ankizivavy sy ankizivavy mahafatifaty izay tsy ahafahan'ireo tranonkala webgler amin'ny tolotra maimaim-poana mba hampisehoana ny fahaizan'izy ireo amin'ny fitantanana hatsaran-tarehy amin'ny fiakanjoana dia tsy avela Mba hahatratrarana ny fahalavorariana, andramo ny akanjo, manova volo volo, manaova fanatanjahantena amin'ny manika, mandinika ny tahirim-bolanao manokana, misafidy ny firavaka tonga lafatra.
Anisan'ireo soso-kevitra sy safidy ahafahan'ny mpilalao rehetra hiaina fialamboly mahaliana amin'ny fomba Indiana Indiana. Alao sary an-tsaina hoe niely nanodidina anao ireo ala mikitroka. Ny vatomamy dia mifamatotra amin'ny rindrina, vato izay natsipy tamin'ny moss, karazana zavamananaina isan-karazany mikiakiaka sy mihorakoraka. Indray mandeha any amin'ny kirin'ny ranomasimbe maitso, dia tsy tokony hitsahatra handroso isika, ary hiverina amin'ny lalana mankany amin'ny lalana marina. Ny lalana dia lava sy voafandrika, feno loza sy tsiambaratelo, fa mitarika mandrakariva ny mpandresy amin'ny harenan'ny foko ao an-toerana.
À ho an'ireo izay tsy matahotra ny hanaiky ilay fanamby, azo atao ny mifehy ny baolina amin'ny lozam-pifamoivoizana telo. Ity dia kilalao tena tsara tarehy sy mahazatra.